Vaovao - Fivoriambe lehibe momba ny fivorian'ny veterinera biby kely faha-13 Atsinanana sy Andrefana
25 Mey, notohanan'ny Komity mpikarakara ny Fihaonamben'ireo mpiompy mpitsabo biby any Atsinanana Andrefana sy ny fampirantiana East-West Zhilan Wuxi Co., Ltd., Fikambanan'ny zava-mahadomelina momba ny zava-mahadomelina ao Shina, Alliance ho an'ny zava-mahadomelina momba ny zava-mahadomelina momba ny zava-mahadomelina. Vondrona fanabeazam-pirenena, Sina Modern mpiompy, ny Konferansa veterinera momba ny biby kely faha-13 any atsinanana sy andrefana notohanan'ny Vondrona Mpanabe Vocational, Sekolim-pianarana University of Nanjing University of Medicine Veterinary sy Chengdu Agricultural Science and Technology Vocational College no nisokatra tao Chengdu.
Niara-nivory ireo hazavana sy aloka, mpitsabo biby manerana ny firenena. Ny lanonam-panokafana ny Konferansa Atsinanana-Andrefana tamin'ity taona ity dia nosokafana tamin'ny endrika famokarana sarimihetsika vaovao. Ireo toko efatra amin'ny "The Opening", "We", "Practitioners", ary ny "The Future Is Coming" dia mifandray amin'ny "Movie Veterinary" hilazana ny tantaran'ireo mpitsabo biby. Ny fihetsika maharitra dia nampitaina tamin'ny taranaka nifandimby, ny lohahevitry ny kaonferansa ny "fanoloran-tena hikaroka fikarohana sy hikaroka zava-baovao" dia mandalo ao amin'ny kaonferansa, manolotra fahazavana fitsangatsanganana sy alokaloka ho an'ny mpijery.
Tamin'ny lanonam-panokafana dia nanakoako tamin'ny mpijery ilay horonantsary fampiroboroboana lohahevitra "Izahay". Mampiseho lalina ny vondrona mpitsabo biby ilay sarimihetsika tamin'ny fisavoritahana izay notsikeraina tany am-piandohana ka hatramin'ny fahatoniana taorian'ny faniriana voalohany, hita taratra ny herimpo sy fikirizan'ireo mpitsabo biby nandritra ny fotoan-tsarotra rehefa sendra olana sy fanamby.
Tao amin'ny hafatra fanokafana nataony, Cai Xuepeng, filohan'ny fikambanan'ny mpitsabo veterinera sinoa, dia nanamafy ny fihetsiky ny mpitsabo biby ankehitriny, ary namporisika ny tsirairay tsy hanadino ireo hetahetan'ny veterinera tany am-boalohany ary hanaraka ny adidy masin'ny veterinera. Miorina amin'ny teknolojia, manatsara ny fiahiana ny biby, mikarakara ny fiainana sy ny fahasalamana, manompoa ny orinasa amin'ny fo manontolo, ary avereno ny fiarahamonina! Adikao tsara ny fanahin'ny veterinera, ny lanjan'ilay veterinera, ary ny herin'ny veterinera.
Amin'ny maha mpitantara ara-tantara ny "The Road to Veterinary Medicine", Li Wenjing, sekretera jeneraly lefitra jeneralin'ny Association Veterinary Association, dia nitantara ny dia sarotra nataon'ny zanak'olombelona veterinera nandritra ny 70 taona mahery hanamafisana ny indostrian'ny veterinera sinoa. Ny indostria rehetra, manomboka amin'ny fivoarana mandroso ka hatramin'ny farany, dia nandalo ny fikarohana mafy nataon'ny teo alohany. Ny sekretera jeneraly lefitra Li Wenjing dia naneho ny fanantenany indrindra tamin'ireo mpitsabo biby "onja miverina", nanantena fa hanaraka ny dian'ireo teo alohany ireo tanora mpitsabo biby ary hiara-hiasa hahatonga ny veterinera ho asa hajaina tokoa!